Sunset Vista flat - Rural Central Portugal
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNatalie
Indawo yethu ye-annexe ikwilali ethandekayo, indawo yokulima, malunga nemizuzu eli-10 ukusuka kwilali yaseCardigos, inevenkile ethengisa ukutya kunye nevenkile yokutyela enkulu. Ifulethi linayo yonke into onokuyidinga ngokuhlala kwakho, kunye nomnyango wabucala wokunyuka izitebhisi eziphambi kwesakhiwo esikhulu, kunye negadi yabucala yokubamba ilanga kwaye ubukele ukutshona kwelanga okuhle.
ngelishwa indawo yethu yokuhlala ayifanelekanga ukungena ngesitulo esinamavili okanye abantu abangakwaziyo ukuhamba ngenxa yokufikelela ekungeneni ngezinyuko.
Indlu inamagumbi ama-3 adibanisayo; igumbi lokuhlambela elimangalisayo, elisanda kufakwa kwaye lihonjiswe ngesiPhuthukezi ngenxa yeethayile kunye nokuhombisa. Oku kukhokelela kwigumbi lokulala elihle, elinefanitshala yakudala, ibuyiselwe ngothando kwaye ihlaziywe ngepeyinti yetshokhwe, kunye nebhedi enkulu etofotofo ephindwe kabini enomandlalo wenkumbulo. Kukho indawo encinci yepaseji ekhokelela kwigumbi lokuhlala / indawo yokutyela kunye nekhitshi esanda kufakwa kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngeembiza neepani, i-cutlery kunye nezitya njl njl. umdlali we-dvd kunye nebhokisi yeTV yesathelayithi. Umnyango wangaphambili wepropathi uphuma kwigumbi lokuhlala uye kwi-balcony yabucala enendawo yokuhlala ukuze ukonwabele, kwaye ngaphandle kukho igadi yokuthambisa ilanga kunye nendawo yokutyela kunye nebarbeque onokuthi uyisebenzise kwaye uyonwabele.
Sikwindawo encinci, yasemaphandleni, yokulima ekufutshane kakhulu kumbindi we-geo-center of Portugal, ilungele ukuphonononga kunye nokubaleka kuxinzelelo kunye nobunzima bobomi bemihla ngemihla.
Umbindi wePortugal unokubonelela kakhulu kude nonxweme olunokhenketho olugqithisileyo kunye nezixeko ezikhulu. ukuba uyazonwabela iintaba, amachibi kunye nangaphandle ke le yindawo yakho. Iilali ezithandekayo ze-schist, iindawo zomnquma, iidiliya ezincinci kunye nabanye babona bantu banobubele emhlabeni bonke balinde utyelelo lwakho.
Idolophu yethu ekufutshane yiCardigos, enevenkile ezi-2 ezincinci zegrosari, kunye nevenkile yokutyela ethandekayo. Kukwakho neelwandle ezininzi zemilambo ngaphakathi kohambo lwemizuzu eli-10 ukuya kweli-15, kubandakanya iCardigos kunye nePego Das Cancelas zonke zineebhari ezinikezelweyo, izindlu zangasese, iibarbeques kunye neendawo zepikiniki. Kunye namathuba amaninzi okuhamba intaba kunye nokuhamba uyonwabile kwindawo entle, emaphandleni angonakaliswanga.
Sikufuphi neZezere kunye neminye imilambo elungele ukuloba kunye nemidlalo yamanzi okanye ukupakisha ipikiniki kunye nokuphuma usuku lokuphumla.
I-annexe flat iyinxalenye yendlu yethu esihlala kuyo ngokusisigxina. Ngoko ke asikho kude ukuba kukho into oyifunayo.